अर्बपति साहुको घरमा चोरी ! — Motivatenews.Com
अर्बपति साहुको घरमा चोरी !
काठमाडौं – एक पटक अर्बपति साहुको घरमा चारी भयो । चोरहरुले केही पनि नछोरी मजाले समान चोरेर हिँडे । विहान साहुको छोरा उठेर हेर्यो र भन्यो, ‘हे भगवान मेरो घर त लुटियो । केही बचेन ।’
यस्तो सोचेर शोक गर्दागर्दै फेरी सोच्यो, ‘लुटिनु त लुटिसक्यो, चिन्ता गरेर के हुन्छ र ?अब घरमा के के छन् सबै बटुलबाटुल गरेर हेर्नपर्यो । सायद केही काम लाग्ने त अझैं बाँकी छ की ?
त्यस्तो सोचेर उसले घरमा कुच्चो लगायो र सबै चीज जम्मा गर्यो । फोहोरको थुप्रोमा फलाम, शीशा आदिका टुक्राहरु भेटायो । त्यही थुप्रोमा एउटा चुम्बक पनि भेट्टायो । त्यही चुम्बकको टुक्राले सबै फलामका टुक्राहरु टिपेर पन्छायो र फेरी थुप्रो केलाउन थाल्यो ।
केहीवेर पछि उसले त्यहाँ सियो, धागो र एउटा टुक्रा कपडा भेटायो । उसले सोच्यो ‘फेरी यहाँ केही भेटियो भने राख्ने झोला पनि छैन, पहिला यो कपडाको झोला बनाउन पर्यो ।’
कपडाको झोला सिलाएर ऊ फेरी त्यही थुप्रोमा अरु चीज खोज्न थाल्यो । एकछिन पछि साहुको छोराले चारवटा सानासाना पोकाहरु फेला पार्योे । ती सानासाना पोकाहरुमा अलिअलि हिराज्वाहरात लुकाएर गाँठो पारेर राखिएको थियो ।
त्यसपछि उसलाई सन्तोश भयो र भन्यो, ‘यति धनले त हाम्रो छोरा नातिसम्मलाई राम्रोसँग पुग्छ । अनि मैले केही व्यापार गरेँ र ईश्वरको कृपा रह्यो भने पहिलाकै जस्तो भैहालिन्छ नी ।’
यो कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ भने चोरी भएर केही चीज हराएर पनि त्यसको चिन्तामा बस्नुभन्दा जे छ त्यसैबाट केही उद्यम गर्न पर्छ । र जीवनलाई सार्थक बनाउन पर्छ । यदी उसले फोहोरमा केही छ की भनेर नखोजेको भए जिन्दगीभर रोएर बस्न पथ्र्यो ।
२०७७ असार १४ गते प्रकाशित